Glass dibera churn siny
fitaratra vatomamy jar
fitaratra sakafo jar
fitaratra tantely jar
fitaratra siny Mason
fitaratra fanosotra jar
fitaratra pudding jar
Glass zava-manitra jar
Cooking Oil Glass tavoahangy
Glass zava-pisotro tavoahangy
Glass Milk tavoahangy
Glass Water tavoahangy
Fanafody Glass tavoahangy
Glass tavoahangy menaka oliva
Reagent fitaratra tavoahangy
Glass Candle Siny
Glass Cup na mug
Glass divay tavoahangy
Beer Glass tavoahangy
California divay tavoahangy fitaratra
Fitaratra tavoahangy toaka
divay mena fitaratra tavoahangy
karan-doha lohany karandohany fitaratra tavoahangy
Vodka fitaratra tavoahangy
Whisky fitaratra tavoahangy
Personal Care tavoahangy
Glass ankasitrahana tavoahangy
Glass tarehy tavoahangy
Rano Soap tavoahangy
Nail poloney Glass tavoahangy
Manitra fitaratra tavoahangy
Xuzhou Yanjia VERA Co., Ltd. dia indostria sy ara-barotra fampidirana orinasa fampandrosoana, famolavolana, ny famokarana, ny varotra sy ny varotra. Ny orinasa naorina tamin'ny Jolay 2009 ary manana 7 departemanta anisan'izany ny sampan-draharahan'ny varotra any ivelany, sampan-draharaha ara-barotra ao an-toerana sy ny departemanta famokarana sy ny sisa. Misy maherin'ny 50 matihanina ara-teknika fitantanana mpiasa sy ny mpitantana ny varotra ao amin'ny orinasa.
Tsy manome entana mihoatra ny 2000 ny karazana indrindra ahitana fitaratra tavoahangy, fitaratra siny, toy ny menaka oliva tavoahangy, fototra kolontsaina siny hoditra, isan-karazany ny zava-pisotro tavoahangy, divay fitaratra tavoahangy, ronono fitaratra tavoahangy, kafe fitaratra fitehirizana siny, labozia mpihazona, fitahirizana tavoara, cosmetie tavoahangy, face siny fanosotra amin'ny volotsangana sarony, ary isan-karazany ny entana vita tamin'ny fitaratra, zava-manitra sy dipoavatra grinder etc.Our ireo vokatra naondrana tany Etazonia, Rosia, Kanada, Aostralia, Vietnam ary 100 hafa firenena sy ny faritra.
Manana ny zo fanondranana entana ary manana efa ho 10 taona ny fampandrosoana sy ny famokarana traikefa. Manaraka ny fitsipiky ny fiaraha-mientana ifampizarana fandraharahana soa, isika dia nanana laza tsara eo ny mpanjifa noho ny tonga lafatra tolotra, tsara ny vidin'ny vokatra sy ny fifaninanana.
Ny orinasa famokarana mandany mandroso ny teknolojia sy ny fikarakarana lalina teknolojia sy manana fitaovana fitiliana mandroso sy fitaovana, izay manampy antsika amin'ny fampandrosoana mafy fahaizana, ary efa nahazo 7 famolavolana-pirenena patanty fanamarinana. Ny kalitaon'ny vokatra fitaratra efa hentitra maso, izay efa nahazo ny fitia ny ao an-toerana sy avy any ivelany na ny mpanjifa. Ankoatra izany, dia manana ekipa matihanina endrika ary afaka mamaritra karazana tavoahangy vaovao ary hataony lasitra vaovao ho an'ny mpanjifa toy ny isan-ny fepetra takiana amin'ny fotoana fohy. Manolotra ihany koa izahay isan-karazany namboarina lalina fanodinana ny fitaratra tavoahangy, toy ny frosting, electroplating, fanafody, decal sy silkscreen, sns entana izahay manome mihoatra ny 2000 no tena ahitana karazana tavoahangy fitaratra toy ny menaka oliva tavoahangy, fototra kolontsaina siny hoditra, isan-karazany ny zava-pisotro tavoahangy, jiro mpihazona, fitahirizana tavoara, fanatsarana tarehy tavoahangy sy entana vita tamin'ny fitaratra isan-karazany mifandraika amin'ny zavatra simika fanandramana toy ny fitaratra beaker, sns koa hoe: izahay manana rafitra fanompoana tonga lafatra ary afaka manome mpandraharaha zato tany toy ny Motor ny fitaterana, fiaran-dalamby, fitateram-dranomasina sy ny rivotra ny fitaterana sy ny sisa.
Afaka hiova finoana ny hevitra sy ny foto-kevitra ho tena vokatra.
Manana ny famokarana ny tsipika, ary afaka manome fifaninanana vidiny.
From manta famokarana fitaovana ho farany, everystepare nandinika noho ny mpiasa mba ho azo antoka ho an'ny satification.
Afaka mamokatra ny vokatra mifototra amin'ny mpanjifa requirements.Your famolavolana sy ny santionany dia nandray.
isika handamina vokatra fomba mijery ny tena, mba hahazoana antoka fa tsara entana willbe voaomana tahaka voalahatra.
Aoka ianao ho ampahany amin'ny fomban-drazana